44 ny mpampianatra mpikaroka tapaka karama: hihamafy ny fitakian’ny Seces, mpandrahraha ary ny mpianatra | NewsMada
Par Webmaster Two sur 29/06/2018
Araka ny efa nambarany, nanao hetsika niaraka ny Seces sy ny mpandraharaha ary ny mpianatra eny amin’ny oniversiten’Antananarivo omaly. “44 ny mpampianatra mpikaroka nahazo “dérogation” avy any amin’ny primatiora fa mbola voatazona hampianatra sy hikaroka ao anatin’ny tontolon’ny oniversite izay tapaka karama nanomboka ny volana febroary lasa teo ka hatramin’izao fotoana izao vokatry ny fitarazohan’ny antontan-taratasy mifandraika amin’izay. 10 mahery amin’izy ireo eto Antananarivo avokoa ary efa feno 60 taona no ho mihoatra”, araka ny fanazavan’ny filohan’ny sendikàn’ny mpampianatra mpikaroka sampana Antananarivo, Ravelonirina Grégoire Sammy,omaly teny Ankatso. Ankoatra izay, nihantona ao amin’ny minisiteran’ny Fitantanam-bola ny fanamboarana ny “indice”-n’ny mpampianatra ho mpikaroka raha efa nisy ezaka nataon’ny mpiasan’ny minisiteran’ny Fampianarana ambony nandrindra ny antontan-taratasy. Voalaza fa noho ny olana momba ny vola no nampiatona ireo zavatra roa ireo amin’izao fotoana izao. Fanampiny ny “indemnité de recherché” ho an’ny mpampianatra mpikaroka efa misotro ronono fa mbola manohy ny asa. Efa tonga ao amin’ny mpizara vola kosa ny saran’ny ora fanampiny tapany faharoa 2015-2016 miaraka amin’ny vatsim-pianaran’ny mpianatra iray volana ary ny vola fampitaovana. “Tsy mitsahatra ny fitokonana satria famonoana afo fotsiny no nataon’ny fanjakana amin’ireo vola voalaza fa vonona ireo. Mitaky vahaolana maharitra ny mpampianatra sy ny mpianatra ary ny mpandraharaha fa tsy rehefa isaky ny misy hetsika vao mikoropaka hatrany ny minisitera mitady vola.
14 000 Ar ny “indemnité” ho an’ny trano fonenana
Ho an’ny sendikàn’ny mpandraharaha, (Spatuant) kosa, mitaky ny hanefana ara-potoana ny karama izy ireo satria hatramin’izay ny fiadidiana ny onivesiten’Antananarivo no manefa ny karama noho ny fahataran’ny fahatongavan’ny vola hampihodinana ny oniversite. Angatahiny ny hanamboarana ny “indemnité” ho an’ny trano fonenana (14 000 Ar amin’izao fotoana izao) sy ny fitaterana ny mpiasa hitovy amin’ny mpiasam-panjakana hafa rehetra. “Mila fiantohana amin’ny fahasalamana koa ny mpandraharaha ary tokony hojerena ny latsakemboka hitsinjovana ny fisotroan-dronono any aoriana”, hoy ny nambaran’ny filohany.
Naneho firaisankina ny toko telo eny amin’ny oniversite, naneho ny fanatsarana entina amin’ny tontolon’ny fampianarana ambony, omaly teny amin’ny Esplanade Ankatso. Efa miaina amin’ny rafitra LMD ny oniversite nefa tsy maharaka ny tohana eo amin‘ny vola.